Umzi mveliso weMveliso | China Imveliso yabenzi kunye nabaxhasi
Ihowuliseyili Chinese Product edityanisiweyo Cross Arm yokwambathisa
Izixhobo ze-crossarm insulators ubukhulu becala ze-porcelain zombane kunye nezinto ezidityanisiweyo. Umbane we-porcelain crossarm insulator sisiqwengana se-porcelain esimise intonga. Faka isibonda ukuxhasa ucingo. IYENZA njengomqhubi wokugquma umhlaba. Kwaye udlale Xa inqanaba levolthi liphezulu, amandla oomatshini we-crossarm insulator kufuneka abe phezulu.
Umbane oMandla oMbane oPhezulu woBunzima bePini
I-pin insulator yinto exhasa okanye ixhoma ucingo kwaye yenza iifomati zombane phakathi kwinqaba kunye nocingo.
Ukukhuselwa okuPhezulu kweRubber Post Post Composite Insulator
I-insulator yentsimbi edibeneyo yenziwe ngeglasi yefayibha ye-epoxy resin rod, i-silicone i-rubber umbrella skirt kunye nokufakwa kwegolide.
Ibhatyi enguSilicone yerabha enguqu
I-silicone yerabha enguqu yokuguqula i-bushing Transformer sheath isetyenziselwa ukuthintela ukwenzakala komntu okubangelwa kukuvezwa kweendawo zonxibelelwano zombane. Imveliso yenziwe ngerabha eyenziweyo ye-silicone yi-HTV vulcanization kubushushu obuphezulu. Yenziwe ngerabha yesiliclic eyenziweyo eyenziwe ngeqondo lobushushu obuphezulu Yiba nokusebenza kakuhle kwe-insulation, amandla ombane we-p / 20 MM, i-1000 resistance yokuxhathisa ukumelana. Uyilo lwemveliso lusengqiqweni, ufakelo lula, ulwakhiwo nokubopha co ...
Ubushushu Tube Shrinkable Bus-bar
Ubushushu obushushu ngebhasi ye-Tube Ubushushu beBar-bar eyenziwe nge-Tube eyenziwe ngee-hydrocarbon ezikhethekileyo ngokuqhubekeka okukhethekileyo, ngokusebenza okuphezulu kakhulu, okusetyenziswa ngokubanzi kwizitishi, iikhabhathi zombane kunye nokunye. 2: 1 3: 1 ...
Nyamezela i-Shed Booster eyonakeleyo yesikhululo sombane
Nyamezela i-Shed Booster eyonakeleyo yesikhululo sombane Isheduli yeshedyuli ingasetyenziswa kwi-30kv ~ 500kv switchgear, disconnector, post insulator, surge arrester kunye ne-transformer insulation yokwandisa indlela yokuvuza kunye nokwandisa ukuxhathisa kongcoliseko. I-booster ye-silicon ye-shed booster ingasetyenziswa ngokubanzi nakweyiphi na isitishi se-porcelain insulation. Inani elilahliweyo, ubume kunye nendawo eya kuthi ichonge kuthathelwa ingqalelo ubungqongqo bendawo yokuchaphazela isiphumo esifanelekileyo. Zingagcinwa kumhlaba omkhulu ...
I-China yoMvelisi woQoqo loQoqsho oluSebenzayo lweKhabhinethi yokuSasaza amandla oMbane
I-China Manufacturer Uhlobo loQinisekiso lweeVoltage eziSebenzayo zoMbane oSasaza iKhabhinethi ilinganiselwe amandla e-100kVA; 200kVA; Ubungakanani be-400kVA 1350M * 700MM * 1200MM inokuba yindawo enokwenzeka ukuba ifanelekile Umbala wangaphandle unokusetyenziswa ngokusetyenziswa ngokubanzi ekusasazeni umbane 1.Ibhokisi yokuhambisa umbane ophantsi ekrelekrele yamkela ii-motherboard zekhompyuter ezihlanganisiweyo, ezinokuthenjwa, iinkqubo zokujonga inkqubo. 2.Ukucutha indawo yokuhlala kwamandla ...